FASAN’ANDRIANA SY DOANY MAY : « Misy ambadika hafahafa hamotehana ny fomban-drazana »
Nisesisesy tato anatin’ny roa taona izay ny trangana fahamaizana tamin’ireo toerana heverin’ ireo mpandala ny fomba maha-malagasy ho vohitra masina. 14 juin 2021
Na io fasan’andriana na Doany izay natokan’izy ireo hangataham-pitahiana amin’ireo razana dia saika mifanesy lasibatry ny afo avokoa.
Manahy mafy amin’ny hoavin’ny kolontsaina malagasy, indrindra fa ny fomban-drazana amin’ny alalan’ny fanajana an’ireo toerana izay nokajian’ny Ntaolo ho masina ireo mpandala ny maha-malagasy. Very hasina ankehitriny ny ankamaroan’izy ireo, raha ny fanazavana voaray. Misy aza dia mahavita manimba sy mandoro azy ireny mihitsy.
Nanao tohy vakana ny fahamaizan’ireo vohitra masina misy ny fasan’ireo Mpanjaka fahiny ary ireo Doany fanaovan’ny olona joro ho fangataham-pitahiana amin’ny razana. Nanomboka izany tamin’ny faharavan’ny rovan’i Manjakamiadana ary nihanaka tamina Faritra maro teto Madagasikara. Tranga niseho farany teo izao ny fahamaizan’ny fasan’andriana sy Doany eny Mahazaza ao anatin’ny Kaominina Ambohimanga Rova. Ity farany izay anisany toerana manan-tantara satria ankoatra ny maha toerana nanjakan’ny Mpanjaka azy dia betsaka ihany koa ireo andriana nanjaka teto Imerina no milevina eny an-toerana. Kila forehitra anefa izany ny sabotsy 29 mey lasa teo. Hotohoto tsy nisy noraisina ny fasan’andriana sy ireo pitsopitson-javatra rehetra fanaovana joro eny amin’ity Doany ity.
“Tsy vao ireny anie ny tranga nisy fa vao tamin’ny herintaona na roa taona lasa ny toerana masin’Andriantsianika razamben’ny Zanakantitra koa no nisy nandoro teny Imerintsiatosika. Ary tato anatin’ny taona maromaro izao dia nifandimby may na niniana nodorana ny Rova tamin’ireo vohitra sokajiana ho anisan’ny tendrombohitra 12 masina eto Imerina, tahaka an’i Manjakamiadana, ny an’Ambohidratrimo, ny teny Ilafy dia io fa mananontanona koa i Ambohimanga”, araka ny fanazavana noentin-dRamaroson Aina, mpikabary sady mpandala ny fomba nentim-paharazana.
Misy ambadika hafahafa sy mampiahiahy
Tsy tongatonga ho azy ny trangan-javatra tahaka ireny, hoy ireo mpandala ny fomban-drazana fa misy tanjona tiana hokendrena. Raha ny fanazavana noentin’izy ireo dia misy ireo vondron’olona mikendry mafy ny hamotika an’ireo toerana manan-kasina eto amin’ny Firenena izay maha-malagasy ny Malagasy. Mampiahiahy, hoy hatrany izy ireo, ny fomba fisehon’ny fahamaizan’ireo toerana ireo izay toa misesisesy loatra na dia mifanelanelana ara-potoana ihany aza. “Tsy tongatonga ho azy ny zava-mitranga fa manana ny antony ho azy manokana ireo olona manimbazimba ny hasin’ny toerana tahaka ireny », hoy hatrany ny fanazavana noentin-dRamaroson Aina.
Azo ambara ho fanimbazimbana sy fanosihosena ny hasin’ireny toerana ireny, izay manana ny hajany manokana amin’ireo mpandala ny fomban-drazana ny fandorana Doany tahaka ireny. Ankilany, ny fomba nahamaizan’ny fasan’Andriana sy ny Doany teny Ambohimanga Rova io dia mbola mampiahiahy azy ireo ihany koa. « Nolazaina tamin’ny fampahalalam-baovao fa noho ny fahamainan’ny hazo manodidina ny trano izay efa tena ela loatra no nahatonga ny firehetana ho azy. Raha ny lojika anefa raha firehetana ho azy dia tokony ho niainga avy tamin’ny rindrina aloha fa tsy avy any ambonin’ny tafo velively. Izany trangan-javatra izany no mampiahiahy », hoy hatrany ny fanehoan-kevitra noentin’ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy. Hatreto anefa, dia mbola mitohy ny fanadihadiana. Ireo mponina teny an-toerana dia samy nilaza ho tsy nahalala izay niandohan’ny afo fa ny afo efa niredareda no hitan’izy ireo.
Famotehana ny fomban-drazana malagasy
Mirakitra soatoavina goavana eo amin’ireo mpandala ny maha-malagasy ny fisian’ireny vohitra masina ireny. Ny finoan’izy ireo izay mamaritra fa afaka mihaino ny fitarainany ireo razambe ka eny amin’ireny toerana masina na Doany ireny no ahafahan’izy ireo mangata-pitahiana amin’ireo razana sy ny Mpanjaka sy izay efa niamboho. Nambaran’izy ireo anefa fa ao anatin’izao fandorana sy famotehana ny Doany izao dia kendren’ireo andian’olon-tsy fantatra ny hahavery hasina an’ireny toerana ireny, ary tena kendren’izy ireo ihany koa ny hamotehana tanteraka ny fomban-drazana malagasy.
“Mety ho anisan’ny zava-kendrena ao anatin’izany, ankoatra ny famerezan-kasina, ny fandevonana ny lafiny tantara raiketin’izy ireny”, araka ny fanehoan-kevitra. “Raha ny fahitanay mpandala ny fomban-drazana ny zava-misy dia efa fantapantatra ihany ireo nanao ankasomparana tahaka izao dia ireo vondron’olona izay fantatra fa mpikambana sy manao fifanarahana amina fikambanana maizina. Izy ireo no mikendry fatratra ny hamotika ny fomban-drazana eto amin’ity Firenena ity », hoy hatrany ny fanazavana. Eo anatrehan’izany dia miantso ny fandraisan’andraikitry ny manam-pahefana voakasika ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy mba hijery akaiky ny tranga tahaka izao.